Thursday November 08, 2018 - 18:03:47 in Wararka by Super Admin
Dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa maanta kamiin u dhigay gaari ay la socdeen saraakiil ka tirsan maleeshiyaatka uu Mareykanku tababaray ee loo yaqaano Bankruf xilli ay ku sii jeedeen saldhigga ciidamada Mareyka
Ilo wareedyo ayaa SomaliMeMo u sheegay in gaari Caasi oo ay wateen Saraakiishan loo galay wadada u dhexeysa Warmaxan iyo Wallaweyn, islamarkaana la huwiyey rasaas xoogan.
Taliyihii Zaadka ee maleeshiyaatkaas oo lagu magacaabi jiray Cabdullaahi Cali iyo haweeney ka tirsan sirdoonka DFS ayaa lagu dilay weerarkaas, waxaana si halis ah ugu dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada gaarka ah ee DFS ee uu Mareykanku tababaray.
Sarkaal ka tirsan Xarakada Al-Shabaab oo ku sugan Sh/hoose ayaa warbaahinta Islaamiga u sheegay in kamiinka uu ahaa mid barakeysan oo lagu beegsaday saraakiil ka timid dhanka Muqdisho oo ku sii jeeday saldhiga Balidoogle.
Weerarkan ayaa ku biirayaa silsilado weeraro ah oo todobaadkan wadada u dhexeysa Muqdisho iyo Balidoogle lagula eegtay maleeshiyaatka calooshood u shaqeystayaasha ah ee uu soo tababaray Mareykanka, waxaana midkii ugu xumaa uu ahaa qarax lagu dilay ugu yaraan shan askari, laguna dhaawacay lix kale oo lala eegtay maleeshiyaatkaas xilli ay marayeen meel u dhow degmada Wallaweyn horaantii todobaadkan.
Dhanka kale, Qarax aad u xoogan ayaa gelinkii dambe ee maanta lala eegtay Kolonyo ka tirsan ciidamada Shisheeye oo ku socdaalayey wadada u dhexeysa Buurane iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar, waxaana qaraxaas lagu burburiyey gaari Gaashaaman.
Idaacadda Andalus ayaa sheegtay in qaraxa lala helay gaari Taw ah, kaas oo bool bool u kala faniinay, wixii saarnaana ay noqdeen dhimasho iyo dhaawac.
Kolonyada la beegsaday ayaa la sheegay in ay raashiin iyo biyo u geynayeen ciidamada ku sugan saldhigyada ku yaalla furimaha dagaalka, islamarkaana qaraxa lala helay xilli ay ku soo noqonayeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar.
Ciidamada Burundi ee ku sugan Sh/dhexe ayaa aalaaba khasaare iyo dhiigbax xoogan kala kulma qaraxyada miinooyinka ee Al-Shabaab.